Perfect Complexion အဖြစ်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ့် Ultra HD Perfector! | CosmeticMyanmar
Home » Article » Perfect Complexion အဖြစ်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ့် Ultra HD Perfector!
Perfect Complexion အဖြစ်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ့် Ultra HD Perfector!
မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ အမဲစက်တွေ အမာရွတ်တွေရှိနေပေမဲ့ မျက်နှာပြင်တဝိုက်လိမ်းခြယ်ဖို့ရန် အချိန်ကြာကြာမပေးနိုင်တဲ့သူတွေအတွက် အချိန်တိုအတွင်းအလွယ်တကူ ဖုံးအုပ်နိုင်မယ့် Ultra HD Perfector လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီ Product လေးဟာ Skin Tint ပုံစံအမျိုးအစားလေးဖြစ်ပြီး မျက်နှာပြင်ရှိ အပြစ်အနာအဆာတွေကို အကောင်းဆုံးဖုံးအုပ်ပေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ တခြား Foundation Product တမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုဖို့ရန် ရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင် ဒီ Product လေးဟာ Medium Coverage ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ကြာရှည်ခံတဲ့အတွက် အရမ်းအသုံးဝင်တဲ့ Product လေးဖြစ်မှာပါ။
ရေဓာတ်ကို အချိန်အတိုင်းအတာတခုတိုင်အောင် ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပြီး နေရောင်ခြည်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့် SPF 25 ပါဝင်တာကြောင့် အသားအရေလေးကိုစိုပြေဝင်းပစေပြီး ကာကွယ်ပြီးသားလည်းဖြစ်တာပေါ့။ သာမန် Foundation တွေအပေါ်မျှော်လင့်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာထက် သာလွန်စွာစွမ်းဆောင်နိုင်တာကြောင့် ပျိုမေတို့အကြိုက်တွေ့မယ့် Product လေးဖြစ်မှာပါ။ အလွယ်တကူ လက်ချောင်းထိပ်လေးတွေကို အသုံးပြုပြီး မျက်နှာအတွင်းမှ အပြင်သို့ တဖြည်းဖြည်း လိမ်းခြယ်သွားလို့ရပါတယ်။ ပိုမိုထိရောက်စွာအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် Foundation Brush လေးကိုအသုံးပြုပြီး လိမ်းခြယ်လို့လည်းရပါတယ်။ အသားအရေ ညိုတဲ့သူမှ ဖြူတဲ့သူအထိ အသုံးပြုလို့ရအောင် Shade အားဖြင့် 10 ရောင်ထုတ်လုပ်ထားပြီး ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ Shade ကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။ အချိန်ကုန် အလုပ်ရှုပ်သက်သာပြီး သဘာဝအတိုင်း ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အသားအရေလေးကို ဖန်တီးပေးနိုင်တာကြောင့် Demand အများဆုံး Product အဖြစ် အခိုင်အမာရပ်တည်နေပါတယ်။
Image Source : www.makeupforever.com